Zvakagadzirwa Zvinyorwa uye Maitiro Acho Zvaunobatsira paZuva Rako Rankings - Expert Of Semalt, Natalia Khachaturyan
Kugadzira zvinhu zvinogona kurondedzerwa sechiito chokusarudza zvinhu kubva kune dzimwe nzvimbo paIndaneti nekuzvinyora sewe pabasa rako pawebsite yako. Pane dzakawanda mawebsite kunze uko ane zvikamu zvehuwandu kune mamwe mawebsite. Dzimwe nzvimbo dzewebhu dzinotora zvinyorwa zvinobva pane imwe webhusaiti uye dzinovaparidzira sebasa ravo pachavo vamwe vachienda kusvika pakukopa mawebsite.
Mhando iyi yemafambiro inopesana nemitemo inowanikwa neGoogle pamwe nemitemo yekodzero muUnited States uye nedzimwe nyika dzakawanda - strutture gonfiabili napoli pizza. Vanhu vakawanda vanochera zvinhu vanoziva kuti vari kuita chinhu chisina kunaka. Saka kana iwe usingatendi kuti uri kurasa zvayo, saka iwe hausi iwe.
Nechirongwa cheChitatu che Semalt , Natalia Khachaturyan, anoti kana iwe uchida kubvisa zvinyorwa zvinenge zvichinyorwa, zvinonzwisisika kuchenjerera kana zvasvika pakuratidza mashoko kubva kune mamwe mawebsite. Dzimwe nguva webmasters vanogona kunge vane 'twitter feeds' kana kuti 'mazana mapfupa' muchecheche. Hazvisi zvakanyanya kuipa. Kwenguva dzakawanda, kuratidzira zvinhu zvakadaro mubato rako rezasi zvakanaka. Zvisinei, kana iwe uchiratidza ruzivo rwakawandisa kubva kune dzimwe nzvimbo zhinji, iwe uri pangozi yekuputsa mazano eGoogle.
Izvi zvinoudza mubvunzo unotevera, zvakadini zvakanyanya? Hapana mhinduro chaiyo yekubvunzurudza iyi, asi inonzwisisika kuti zvinyorwa kubva kune dzimwe nzvimbo hazvidi kudarika 10 muzana yehutaneti hwehutano hwako Mutevedzeri wakanaka unogona kunge uri bhuku rinowanzova nehuwandu hwemashoko ekufambisa. Kana zvikamu zvako zvebhurugi zviduku zvakanyanya, zvingangodaro kuti newsfeeds yako ichanyatsogutsikana kupfuura blog yako.
Funga kuti injini yekutsvaga yaizoona peji yakadaro. Ichagumisa kuti vazhinji veji rako rakazadzwa nezvinhu zvisiri zvepakutanga, kana zvakadzokidzwa zvakagadzikana semakumbo ako uye logo. Somugumisiro, iwe iwe webhutaneti haugoni kutaridzirwa semudzidzisi mukuru wehurukuro yezviri mukati.
Unofanirwa kuziva kuti Google yakarondedzera mimwe mienzaniso yezvinofunga kuti iri kupera. Semuenzaniso, mawebsite anonyora nekudhindazve zvinyorwa kubva kune mamwe mawebsite pasina kuwedzera chero mhando yezvakakunakira kwaari kana kuti kukoshesa inofungidzirwa kuti inogutsikana scrappers. Izvo zvinoshandiswa kune zvikamu zvinonyora zvinyorwa kubva kune mamwe mawebsite uye zvino zvishandura zvishoma, zvichida nokuisa mumashanduriro ezvinyorwa uye zvakare kuzvinyora zvakare. Vanogonawo kuedza kuchinja zvinyorwa vachishandisa mashandisirwo emhando dzakadai semashoko anotsvaga.
Saizvozvowo, dzimwe nzvimbo dzinogona kubereka nguva dzose zvinyorwa zvinodyiwa kubva kune mamwe mawebsite pasina kupa vashandi vadzo chero nzira ipi zvayo yehutano kana yekubatsira. Izvi zvinopesana neGoogle mazano uye zvinogona kurangwa zvakanyanya nokuda kwayo.
Kugadzira zvinhu hazviregi zvinyorwa. Izvo zvinoshandawo pane zvakapindirwa zvakadai semifananidzo, vhidhiyo nedzimwe mhando dzevhidhiyo. Muchiitiko ichi, mamwe mawebsite anogona kuvhara zvinyorwa izvi kubva kune mamwe mawebsite asi pasina kuwedzera chero chinhu chakakosha kumushandisi. Izvi pamwe chete zvinogona kurangwa zvakaoma nevanjini. Zvinongokuvadza hutungamiri hwako muzvinjini zvinotsvaga, pane kuvabatsira.